प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीको राजिनामा बारे के भन्छ एन्फा ?को हुन् पंकज नेम्वाङ्ग ? - लाल बिहानी
प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीको राजिनामा बारे के भन्छ एन्फा ?को हुन् पंकज नेम्वाङ्ग ?
१० साउन , काठमाडौं । आइतबार दिउँसो सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले राजिनामा घोषणा गरे। मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरीले राजीनामाको घोषणा गर्नुको कारण नेपाल फुटबल एसोसिएसन (एन्फा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेम्वाङ भएको उनले बताए ।
सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘प्रिय नेपाली समर्थकहरू म वरिष्ठ उपाध्यक्षले पछिल्लो तीन हप्तादेखि गरिरहेको नाटकका कारण राजीनामा दिन गइरहेको छु । अब तपाईँ खुसी हुनु भयो होला नि पंकज विक्रम नेम्वाङ ?’
अब्दुल्लाहको उक्त फेसबुक स्टाटस देख्ने बित्तिक्कै धेरै नेपालि फुटबल प्रेमीहरुले दुख व्यक्त गर्दै पंकज नेम्वाङ्गको बारेमा चासो व्यक्त गरे । धेरैले पंकजलाई गालि गर्दै उनको फ़ेसबूकमा गैर तथानाम गालि समेत गरेका छन् ।
को हुन् पंकज नेम्बाङ ?
२०७५ वैशाख १२ गते शनिबार भएको एन्फाको १६औं साधारणसभाबाट कर्मा छिरिङको प्यानल निर्वाचित भएको थियो । सोही प्यानलबाट उपाध्यक्ष पदमा विजयी भएका नेम्बाङ २०७६ साल वैशाख ३१ गते एन्फाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुनिएका थिए ।
पछिल्लो समय एन्फाको राजनीतिसँगै पंकज विक्रम अध्यक्षको कटु आलोचकका रूपमा देखा परेका छन् । कार्यसमिति बैठक बहिस्कार, नोट अफ डिसेन्ट लगायतका विषयका कारण चर्चामा आइरहने नेम्बाङलाई आगामी चुनावमा अध्यक्ष पदको प्रत्याशीका रूपमासमेत हेरिएको छ । तर, प्रशिक्षकको राजीनामापछि उनी विवादित बनेका छन् ।
यु-१६ टोलीमा योग्य खेलाडीलाई बाहिर राखेर आफ्नो छोरालाई जबरजस्ती टोलीमा घुसाइएको विषयमा पनि नेम्बाङको तिव्र आलोचना भएको थियो ।
२०७६ को असोजमा जोर्डनमा भएको एएफसी च्याम्पियनसिप छनोट खेल्न जोर्डन गएको नेपाली यु -१६ टोलीको पहिलो रोजाइका गोलकिपर रोशन नेपाललाई टोली बाहिर राख्दै नेम्बाङका छोरा पथ्युहाङ नेम्बाङलाई जोर्डन पठाइएको थियो ।
पंकज नेम्वाङ के भन्छन्,?
अब्दुल्लाहले राजिनामा दिने कुरा सुनेपछि आफु आस्चर्यचकित भएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्बाङले बताएका छन् । उनले भने-‘मेरो स्पष्ट कुरा छ । यो निराधार षडयन्त्रपुर्वक ममाथि आएको विज्ञप्ति ठानेको छु । म जहिलेपनि सत्यको वकालत गर्दै एन्फामा बसिरहेको व्यक्ति हो’। नेम्वाङ्ग भन्छन – ‘एन्फाले यस विषयमा छानबिन गर्छ । म दोषी देखिए फुटबल संघबाट राजीनामा दिन्छु । छानबिनबाट जो दोषी देखिन्छ । त्यसको भागीदार हुनुपर्छ । यसबारे एन्फाले छानबिन समिति गठन गरेर चाडो भन्दा चाडो समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग छ’, उनले भने ।
पछिल्लो समय प्रशिक्षकसँग आफ्नो सम्वाद नै नभएको उनले बताएका छन् । यद्यपि ८–१० दिन अघि ‘खेलाडी मात्र होइन, खेलसँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरुको मानसिकता परिवर्तन हुनुपर्छ’ भन्ने प्रशिक्षकको अभिव्यक्तिलाई लिएर आफूले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ भनेर महासचिवलाई भनेको उनले स्वीकार गरे ।
एन्फा के भन्छन ?
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले नेपाली राष्ट्रिय टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरिको आधिकारिक रुपमा कुनै राजिनामा नआएको बताएको छ ।
एन्फा प्रवक्ता किरण राईले मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीको राजीनामा एन्फाभित्रको राजनीतिका कारण नभएको भन्दै अल्मुताइरीले राजीनामा दिने घोषणा गरेको विषयमा औपचारिक जनाकारी नभएको बताए । राजीनामा दिने घोषणा सामान्य असझदारीका कारण भएको हुन सक्ने उनको भनाई छ । अल्मुताइरीले राजीनामा दिने घोषणा फेसबुकमा मात्रै गरेकाले आधिकारिक रुपमा एन्फामा राजीनामा नआएको बताए ।